मदन भण्डारी गोल्डकपको फाइनलमा थ्री स्टार र मनाङ भिड्दै – Online Jagaran
मदन भण्डारी गोल्डकपको फाइनलमा थ्री स्टार र मनाङ भिड्दै
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०३:०२ April 2, 2018 जागरण
रुपन्देही, १९ चैत (जागरण) ।
तेस्रो मदन भण्डारी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि थ्री स्टार र मनाङ मस्र्याङ्दी भिड्दै छन् । आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स ऐकेडेमीलाई हराउँदै थ्री स्टार र सुनौली संगम बुटवललाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी खेलको फाइनलमा प्रवेश गरेका थिए ।
खेल दिउँसो २ बजेपछि रामनगरमा रहेको मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानमा सुरु हुने आयोजकले बताएको छ । तर फाइनल खेल १ दिनको ग्याप हुनुपर्ने फिफाको नियम भएकाले यो फाइनल खेल नियम विपरित भएको भन्दै थ्री स्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसी ले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
शुक्रबार पूर्व निर्धारीत खेल हावा हुरीका कारण स्थगित भएपछि आइतबार सेमिफाइनल खेल भएको थियो । खेलको बिजेताले उपाधिसहित नगद १५ लाख र उपबिजेताले नगद ७ लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको सेमिफाइनमा पुग्ने २ टिमलाई ५० – ५० हजार नगद प्रदान गरिने छ ।
औषधि नपाएर रित्तै फर्कंदै बिरामी
डीपीएलमा आज कुन–कुन टिम खेल्दैछन् ?
सामुदायिक वन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले के योजना बनाएको छ ? (अडियोसहित)
१७ कार्तिक २०७६, आईतवार ०६:३९ November 3, 2019 जागरण
कर्णालीमा बढ्दै साइकल सवारी
३ श्रावण २०७८, आईतवार १५:५८ July 18, 2021 जागरण
कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको विकास सरकारकाे पहिलो प्राथमिकताः मन्त्रि खनाल
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार १९:३९ March 14, 2019 जागरण